Qaab dhismeedka Qaabdhismeedka Qaab dhismeedka Casriga ah Prefabricated Warehouse / Workshop / Diyaaradaha Hangar / Qalabka Dhismaha Xafiiska
Budada 'gypsum budada', marka hore waxaa loo diraa silo iyadoo la raacayo wiishka baaldiga, ka dibna waxaa lagu quudinayaa in lagu siiso silo; ka dib markaad si sax ah u cabirto, budada ayaa lagu quuiyaa qasaaladda. Alaabta ceyriinka ah iyo biyaha ayaa si fiican loogu qasay slurry waxaana lagu shubay mashiinka qaabeynta. Kadibna saldhigga haydarooliga wuxuu kaxeeyaa nidaamka wiishka hawo-qaadka si uu uga qaado baloogyada 'gypsum blocks' caarada Isla mar ahaantaana, haysa qaboojiyaha booska, wiishka iyo daabulidda baloogyada illaa daaradda qallajinta. Nidaamka oo dhan waxaa gacanta ku haya PLC.
Budada 'gypsum' ee dabiiciga ah ee calcined marka hore waxaa loo diraa silo budada, silooga wuxuu la socdaa qalab dheellitiran, iwm. Kadib budada ayaa soo galaysa miisaanka miisaanka, ka dib marka lagu cabiro miisaanka elektarooniga ah, maaddadu waxay ku dhex jirtaa fiicni iyada oo loo marayo waalka pheumatic. Biyuhu waxay ku galaan fiicnihiisa aaladda cabirka biyaha. Waxyaabaha kale ee lagu daro waxaa lagu dari karaa wax lagu qaso sida waafaqsan shuruudaha dhabta ah.